चर्चित गायक राजेश पल राईको बर्थडे मा सुरक्षा केक लिएर घर पुगेपछि घोषणा भयो विहेको मिति! सुरक्षा लाजले भुतुक्कै (भिडियो सहित) – Kavrepati
Home / मनोरंजन / चर्चित गायक राजेश पल राईको बर्थडे मा सुरक्षा केक लिएर घर पुगेपछि घोषणा भयो विहेको मिति! सुरक्षा लाजले भुतुक्कै (भिडियो सहित)
admin3weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 185 Views
राजेश पायल राई नेपाली गायक हुन ! उनले थुप्रै नेपाली चलचित्रका गीतहरूमा स्वर दिइसकेका छन ! उनी विश्वमै ५ घण्टामा ९ गीत रेकर्ड गर्ने उनी नै पहिला गायकका रुपामा उनलाई चिनिन्छ। विभिन्न चलचित्रमा समेत स्वर दिएका राजेश पायल चलचित्रका कलाकार पनि हुन् । उनले दैवसंजोग, दौतरी, परेनि माया जालैमा, सी माला तथा गुण्डाराजमा सशक्त अभिनय गरेका छन् ।
यस्तै करिब ३ सय पचास चलचित्रमा स्वर समेत दिएका राईले पहिलो पटक २०५४ सालमा अशोक शर्माको चलचित्र गरिबको तीन वटा गीतमा आफ्नो स्वर दिएका थिए । त्यसपछी चलचित्रमा पार्श्व गायनमा उनी ब्यस्त भइ रहेका छन् । विश्वका प्राय सवै चर्चित मुलक भ्रमण गर्नुको साथै कन्सर्ट गरेका राईले २०५३ सालमा पहिलो विदेश भ्रमण हंगकंग गएका थिए ।
जहाँ उनको जिवनको पहिलो वैदेशिक कन्सर्ट थियो । २०६० साल असार १२ गते विराटनगरको रिभ्स डिजीटल रेर्कडिङ स्टूडियोमा ५ घण्टामा ९ वटा गीत रेकर्ड गराएका थिए । सम्भवत: विश्वमै यसरी ५ घण्टामा ९ गीत रेकर्ड गर्ने उनी नै पहिला गायक हुन। गायक राईले २०६६ सालमा रिलिज भएको चलचित्र शिलशिलाबाट विभिन्न अवार्ड समेत जिते । यस्तै उनी २०६७ मा छिन्नलता पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कारबाट पनि सम्मानित एवं पुरस्कृत भइ सकेका छन् । हेर्नुहोस उनको जन्मदिनमा गरिएको रमाइलो कुराकानीको भिडियो हेर्नुहोस्
Previous आज पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको ४५ औ जन्मदिन, अहिले पनि छिन् उस्तै सुन्दर (तस्बिर सहित)
Next को हुन् मोटरसाईकलबाटै पहिलो पटक मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने यी युवा ?